Iprofayile yeNkampani-Inkampani yaseHuizhou Ming Da eyiNkampani yezoMbane
Imoji yesiqhelo yokuTswina
Isiguquli soRhoqo esiPhezulu
Izixhobo zombane nezombane
BEST INDUCTOR GROUP CO., EBEKELWEYO
Eyona Inductor Group Co., Ltd., ekwabizwa ngokuba yiHuizhou Mingda Precise Electronics Co, Ltd. Yi ishishini elinobuchwephesha obuphezulu eligxile ekwenzeni ulwenziwo olwahlukileyo kunye neendlela zokuguqula izinto zabathengi. Itholakala kwiZhongkai High-tech Zone Development, kwisiXeko saseHuizhou, kwiPhondo laseGuangdong.Kuneziseko zokuvelisa eHuizhou, eXianyang, eNanning, njl njl. Iimveliso zethu eziphambili ngokusesikweni zigqunyiwe ngokubanzi kwiimveliso zonxibelelwano, izixhobo zombane zonyango, izixhobo ze-elektroniki, izixhobo zemidlalo, izixhobo zobuhle, nazo zonke iintlobo zombane wabathengi, njl.
Sinabasebenzi abaninzi abaqeqeshiweyo nabanobuchwephesha abanamava atyebileyo kwi-R & D kunye nemveliso, besebenzisa izixhobo zomgangatho webanga lezomkhosi kunye neetekhnoloji ezininzi zobunini, ezinikele kwizixhobo zombane zonyango, izixhobo ze-elektroniki zezithuthi, i-IT, i-aerospace, ukhuseleko kunye neemveliso zomkhosi kunye nezinye iinkalo ukubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nokuchaneka kweemveliso zekhoyili.
Ukulandela uxanduva lokukhokela kuphuhliso lwamacandelo oshishino, siyanyanzelisa kumgaqo weshishini "wokuSinda ngoBulunga, uPhuhliso ngoBuchule". Inkampani yethu iphuhlise yaba ngomnye wabenzi be coil ze-inductor abaqeqeshiweyo e-China.
Siyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba uMing Di-Precision Electronics Co, Ltd. iya kuba ngumnikezeli wakho ophezulu kunye neqabane elisondeleyo!
Sisebenza kunye ne-inductors, ii-inductors eziqhelekileyo, ii-coil zomoya, ii-chip inductors, kunye neziguquli kangangeminyaka eli-12.
Ukugxininisa kwimveliso yeemveliso ezizenzekelayo, sinokubonelela abathengi ngeemfuno zoyilo lweemveliso, sincede abathengi basombulule iingxaki zentsebenzo yemveliso, kunye noyilo lwezisombululo zokusebenza ezifanelekileyo.Sinepamagcisa asebenzayo anamava angaphezulu kweminyaka elishumi yamava Owenza ngobuchule ngokubhijela.
Zonke iinxalenye zemveliso zikhethwe kumgangatho ophezulu, abathengisi bezinto abadumileyo.
Ukubonelela abathengi kwihlabathi liphela ngeenkonzo zokwenza ngokwezifiso iimveliso, unonophelo kunye neenkonzo zokubonisana ngemveliso kunye umgangatho ophezulu inkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa, kunye nokwamkela iimfuno zokuveliswa kwevolumu enkulu kunye nevolumu encinci.
No. 26 Zhongkai High-Tech Development District, Huizhou, Guangdong, PRChina
Ifowuni: +86 19849482029 Imeyile: anna@tclmd.cn
Ukhetho lwezixhobo zombane
Iimveliso Iindaba Ngathi